Kuwani waa cibaarooyinka Adobe Photoshop CC 2017, oo hadda la heli karo | Abuurista khadka tooska ah
Maxaa Ku Cusub Adobe Photoshop CC 2017
Adobe CC 2017 hadda waa la heli karaa Iyo haddii aad ka mid tahay malaayiinta isticmaaleyaasha hal-abuurka ah ee sugayay daabacaadda cusub ee qaybtaas barnaamijyada, hubaal waxaad aad u xiiseyn doontaa daabacaddan oo aan uga tagnay faahfaahinta gaarka ah.
Aynu diirada saarno Adobe Photoshop iyo soogalootiga cusub barnaamijkan caan ka ah taasna waxay bedeshay muuqaalka naqshadaynta iyo hal-abuurnimada sannado hadda. Adobe ah xitaa hadda wuxuu tagaa Chromebooks, sidii aan shalay u kulanay.
Isbedelka ugu muuqda waa kan daaqad abuurista dukumiinti cusub, iyo intaanan cirka u qaylin wuxuu badbaadin doonaa waqti badan marka aad bilowdo sameynta waxyaabo cusub.
Daaqada cusub ayaa ah oo diirada lagu saaray horudhac iyo tusaalooyin, laba farsamood oo u muuqda inay waqti badan badbaadiyaan isla markaana kordhiyaan wax soo saarka. Ka sokow, waxaad ka heli doontaa noocyo cusub oo qaabab ah sawir, muuqaal ah, iwm. Qaybta midig ee daaqadda waad u habeyn kartaa hore-u-dejiyeyaasha, halka qaybta hoose ay si buuxda u siinayso dhammaan tusmooyinka Adobe Stock.
Adobe ayaa sidoo kale ku daray a muuqaal raadinta cusub kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku quusto Photoshop, Adobe Learn, iyo Adobe Stock. Waxa muhiimka ah ayaa ah inaad hadda haysato fursado dhowr ah oo aad heli karto markaad raadineyso dhammaan qaybahaas.
Mid kale oo aad u xiiso badan oo lagu daray ayaa ah ikhtiyaarka «Hel mid la mid ah»Waxaa laga dhex helay guddiga maktabadaha oo kuu oggolaanaya inaad ka raadsato adeegga Adobe Stock shaqooyin la mid ah kuwa la xushay. Sikastaba, waxaad haysataa ikhtiyaarka inaad haysato raadinta dhaqameed ee kuu oggolaanaysa inaad raadiso nuxurka.
Waxaa jira warar kale oo xiiso leh oo ay ka mid yihiin is dhexgalka wanaagsan ee Adobe XD taas oo u oggolaaneysa in laga soo jiido shiraaca Photoshop, iyo in SVG lagu rido Adobe XD, iyo in la taageero xarfaha loo yaqaan 'OpenType SVG' oo lagu bixiyo midabbo badan iyo culeysyo hal glyph ah.
Qalabka polygonal lasso ayaa lagu daray goobta shaqada xulashada iyo maaskaro si loo hagaajiyo awooda lagu sameeyo xulashooyinka, iyo sidoo kale hagaajinta waxqabadka
Una cusbooneysiin xiiso leh loogu talagalay macaamiisha Creative Cloud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Maxaa Ku Cusub Adobe Photoshop CC 2017
Wadashaqeynta ugu fiican ee udhaxeysa naqshadeeyayaasha, iyo udhaxeeya naqshadeeyayaasha iyo horumariyeyaasha ... shaki la’aan Photoshop CC 2017. Waxaan horeyba u tijaabinayaa nooca tijaabada ah kombuyutarkayga, horeyna waan kuugu sheegay inay war hayso, marka dib u eegis baa lagu yiri. ..
Waxaan ku laaban doonaa ra'yigayga… :)
Maxaa ku cusub Jaantuska CC 2017
Mid ka mid ah dhibcaha filimka ugu wanaagsan xilliyadii ugu dambeeyay